14 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Sɛ kwata yɛ obi a, da a wɔde no bɛba ɔsɔfo anim+ ma wakyerɛ sɛ ne ho tew no, nea wɔbɛyɛ no ho mmara+ ni. 3 Ɔsɔfo no nkɔ nsraban no akyi nkɔhwɛ kwatani no. Sɛ ɔsɔfo no hu sɛ ne ho afi+ a, 4 ɔsɔfo no mma ɔmfa nnomaa+ a wɔn ho tew abien ne kyeneduru+ ne koogyan+ ne sommɛ+ a ɔde bɛtew ne ho mmra. 5 Ɔsɔfo no mma wonkum anomaa biako wɔ kuku a mmasu wom mu.+ 6 Afei ɔmfa anomaa biako a aka no ne kyeneduru ne koogyan ne sommɛ no nyinaa mmɔ anomaa a wokum no mmasu so no mogya mu. 7 Na ɔmfa mpete+ nea ɔrebɛtew ne ho afi ne kwata ho no ho mpɛn ason.+ Afei ɔnkyerɛ sɛ ne ho tew,+ na onnyaa anomaa a aka no mma ontu nkɔ wuram.+ 8 “Ɛsɛ sɛ nea ɔrebɛtew ne ho no horo ne ntade+ na oyi ne ho nhwi nyinaa na oguare+ ma ne ho tew ansa na waba nsraban no mu. Na ɔntena ne ntamadan akyi nnanson.+ 9 Da a ɛto so ason no, onyi ne ti nhwi+ ne ne bogyesɛ ne n’ani akyi nhwi nyinaa. Asɛm no ara ne sɛ, ɛsɛ sɛ oyi ne ho nhwi nyinaa horo ne ntade na oguare, na ama ne ho atew. 10 “Na da a ɛto so awotwe+ no, ɔmfa adwennini nkumaa abien a wɔte apɔw ne oguammere+ kumaa biako a ɔte apɔw a wadi afe mmra, na ɔmfa esiam muhumuhu efa nkyem du mu abiɛsa a wɔde ngo afra ne ngo toa biako+ mmɛbɔ aduan afɔre.+ 11 Na ɔsɔfo a ɔkyerɛ sɛ onipa no ho tew no mfa nea ɔretew ne ho no ne nneɛma no nyinaa mmra Yehowa anim wɔ ahyiae ntamadan no ano. 12 Afei ɔsɔfo no mfa odwennini kumaa biako a ɔde bɛbɔ asodi afɔre+ no ne ngo no+ mmra, na onhim wɔ Yehowa anim sɛ ohim afɔre.+ 13 Onkum odwennini no wɔ baabi+ a wokum mmoa a wɔde bɔ bɔne ne ɔhyew afɔre no. Wonkum no wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron,+ efisɛ asodi afɔre yɛ ɔsɔfo no dea+ te sɛ bɔne ho afɔre no ara. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. 14 “Afei ɔsɔfo no mfa aboa a wɔde rebɛbɔ asodi afɔre no mogya no bi nyɛ nea ɔretew ne ho no asõ nifa ne ne nsa nifa kokurobeti ne ne nan nifa kokurobeti ho.+ 15 Ɔsɔfo no nhwie ngo no+ bi ngu n’ankasa nsa benkum mu. 16 Na ɔsɔfo no mfa ne nsateaa nifa mmɔ ngo a ɛwɔ ne nsa benkum mu no mu, na ɔmfa mpetepete hɔ mpɛn ason+ wɔ Yehowa anim. 17 Ɔsɔfo no mfa ngo a aka wɔ ne nsam no bi nyɛ nea ɔretew ne ho no asõ nifa ne ne nsa nifa kokurobeti ne ne nan nifa kokurobeti ho. Ɔmfa nyɛ baabi a ɔde asodi afɔre no mogya yɛe no.+ 18 Afei ɔsɔfo no nsɔn ngo a aka wɔ ne nsam no ngu nea ɔretew ne ho no mpampam, na ɔmpata+ mma no wɔ Yehowa anim. 19 “Ɔsɔfo no mmɔ bɔne ho afɔre+ no na ɔmpata mma nea ɔretew ne ho afi ne ho fĩ ho no, na ɛno akyi no onkum aboa a ɔde bɛbɔ ɔhyew afɔre no. 20 Afei ɔsɔfo no+ mmɔ ɔhyew afɔre ne aduan afɔre+ no wɔ afɔremuka no so, na ɔsɔfo no mpata mma no+ na ne ho ntew.+ 21 “Na sɛ ɔyɛ ohiani+ na ne nsa nsõ so+ a, ɔmfa odwennini kumaa biako mmra sɛ asodi afɔre ne ohim afɔre, na wɔmfa mpata mma no. Afei ɔmfa esiam muhumuhu efa nkyem du mu biako a ɔde ngo afra ne ngo toa biako mmra sɛ aduan afɔre, 22 ne mmuruburuw+ abien anaa mmorɔnoma mma abien, nea ne nsa bɛsõ so biara. Ɔde aboa biako bɛbɔ bɔne ho afɔre na ɔde biako abɔ ɔhyew afɔre. 23 Da a ɛto so awotwe no+ ɔmfa mmrɛ ɔsɔfo no wɔ ahyiae ntamadan+ no ano wɔ Yehowa anim. Ɛno na wɔde bɛtew ne ho.+ 24 “Na ɔsɔfo no mfa odwennini a ɔde bɛbɔ asodi afɔre+ no ne ngo no mmra, na onhim wɔ Yehowa anim sɛ ohim afɔre.+ 25 Na onkum odwennini a ɔde rebɛbɔ asodi afɔre no, na ɔsɔfo no mfa mogya no bi nyɛ nea ɔretew ne ho no asõ nifa ne ne nsa nifa kokurobeti ne ne nan nifa kokurobeti ho.+ 26 Afei ɔsɔfo no nhwie ngo no bi ngu n’ankasa ne nsa benkum mu.+ 27 Na ɔmfa ne nsateaa nifa mmɔ ngo a ɛwɔ ne nsa benkum mu no mu, na ɔmfa mpetepete+ hɔ mpɛn ason wɔ Yehowa anim. 28 Ɔsɔfo no mfa ngo a aka wɔ ne nsam no bi nyɛ onipa no asõ nifa ne ne nsa nifa kokurobeti ne ne nan nifa kokurobeti ho. Ɔmfa nyɛ baabi a ɔde asodi afɔre no mogya yɛe no.+ 29 Afei ɔsɔfo no nsɔn ngo a aka wɔ ne nsam no ngu nea ɔretew ne ho no mpampam,+ na ɔmpata mma no wɔ Yehowa anim. 30 “Afei ɔmfa mmuruburuw anaa mmorɔnoma a ne nsa bɛsõ so+ no mu biako mmra. 31 Nea ne nsa bɛsõ so no, ɔmfa biako mmɔ bɔne ho afɔre+ na ɔmfa biako nso mmɔ ɔhyew afɔre+ nka aduan afɔre no ho. Na ɔsɔfo no mpata+ mma nea ɔretew ne ho wɔ Yehowa anim no. 32 “Eyi ne mmara a ɛwɔ hɔ ma nea ɔyaree kwata nanso ne nsa nsõ n’ahodwirade so no.” 33 Yehowa ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ: 34 “Sɛ mudu Kanaan asase+ a mede ama mo sɛ mo agyapade+ no so na mede kwata hyɛ ofie bi mu wɔ mo asase no so a,+ 35 ofiewura no mmɛbɔ ɔsɔfo no amanneɛ sɛ, ‘Biribi te sɛ yare bɔne bi aba me fie.’ 36 Ɔsɔfo no nhyɛ mma wonyi biribiara mfi fie hɔ ansa na wabɛhwɛ ade bɔne a aba hɔ no, anyɛ saa a obebu biribiara a ɛwɔ fie hɔ sɛ ɛho ntew. Afei ɔsɔfo no bɛba abɛhwɛ fie hɔ. 37 Sɛ ɔba na ohu sɛ biribi a ɛte sɛ akokɔsrade a ani dum wɔ dan no ho ma adidi kɔ dan no mu kakra a, 38 ɔsɔfo no mfi fie hɔ nkɔ abɔnten na ɔnto fie no mu+ nnanson. 39 “Da a ɛto so ason no, ɔsɔfo no nsan nkɔ fie hɔ nkɔhwɛ.+ Sɛ ohu sɛ yare no atrɛw wɔ dan no ho a, 40 ɔsɔfo no nhyɛ mma wonyiyi+ abo a yare no ayɛ ho no, na wɔnkɔtow ngu kurow no akyi beae a ɛhɔ ntew. 41 Afei ɔnwerɛwerɛw fie no mu adan nyinaa ho na wɔnkɔtow dɔte no ngu kurow no akyi beae a ɛhɔ ntew. 42 Wowie a, wɔmfa abo foforo nhyɛ kan de no ananmu, na wɔnwɔw dɔte foforo nsra dan no ho. 43 “Sɛ woyiyi abo no, werɛwerɛw dan no ho, de dɔte sra ho wie, na yare no san ba a, 44 ɔsɔfo+ no mmra mmɛhwɛ. Sɛ ohu sɛ yare no atrɛw wɔ fie hɔ a, ɛyɛ kwata a ɛyɛ hu+ na aba fie hɔ. Ɛho ntew. 45 Afei ɔmma wonnwiriw fie mũ no nyinaa ngu, na wɔnkɔtow ɛho abo ne nnua ne dɔte nyinaa ngu kurow no akyi beae a ɛhɔ ntew.+ 46 Nanso sɛ wɔto ofie no mu+ na obi ba hɔ a, ne ho rentew kosi anwummere;+ 47 na nea ɔbɛda fie hɔ ne nea obedidi fie hɔ no nhoro ne ntade.+ 48 “Na sɛ wɔde dɔte sra dan no ho wie na ɔsɔfo no bɛhwɛ na yare no nsan mmaa ofie hɔ a, ɛnde ɔnkyerɛ sɛ ofie no ho tew, efisɛ yare no ase atu.+ 49 Nea ɛbɛyɛ na watew ofie no ho afi bɔne ho no, ɔnhwehwɛ nnomaa+ abien ne kyeneduru+ ne koogyan+ ne sommɛ. 50 Na onkum anomaa biako wɔ kuku a mmasu wom mu.+ 51 Ɛno akyi no, ɔmfa kyeneduru no ne sommɛ+ ne koogyan ne anomaa biako a aka no nyinaa mmɔ anomaa a wokum no mmasu so no mogya mu, na ɔmfa mpete+ ofie no ho mpɛn ason.+ 52 Afei ɔmfa anomaa no mogya ne mmasu no ne anomaa a aka no ne kyeneduru no ne sommɛ ne koogyan no ntew ofie no ho mfi bɔne ho. 53 Na onnyaa anomaa a aka no wɔ kurow no akyi ma ɔnkɔ wuram, na ɔmpata+ mma ofie no na ɛho ntew. 54 “Eyi ne mmara a ɛwɔ hɔ bere a kwata+ ayɛ obi ne bere a ne nhwi atutu,+ 55 bere a kwata ayɛ atade mu+ anaa aba fie bi mu, 56 bere a biribi abesi obi honam ani na ahyɛ nsu anaa ne honam atwintwam anaa asoa.+ 57 Eyi yɛ akwankyerɛ+ a ɛbɛma wɔahu ade a ɛho ntew ne nea ɛho tew. Eyi ne kwata ho mmara.”+